စကားမတည်ခဲ့တဲ့ လူကာကူကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ကာဆာနိုနဲ့ လူကာကူကြောင့် ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးကို စတေးရမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ဇိုလာ - SPORTS MYANMAR
စကားမတည်ခဲ့တဲ့ လူကာကူကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ကာဆာနိုနဲ့ လူကာကူကြောင့် ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးကို စတေးရမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ ဇိုလာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း အတွင်း ၊ အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ် လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူး နဲ့ ၎င်းရဲ့ အသင်းဟောင်း ချဲလ်ဆီး အကြား အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်နေခဲ့ပြီး ၊ ကလပ် ၂သင်းကြား ဆွေးနွေးမှုတွေကလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် ။
အသက် ၂၈နှစ် အရွယ် လူကာကူ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ မတိုင်မီ ၊ အင်တာဗျူးတွေမှာ အင်တာမှာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အကြောင်း ၊ အသင်းပြောင်းမှာ မဟုတ်ကြောင်း တွင်တွင် ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ၊ အခုအခါမှာ ၎င်းဟာ ချဲလ်ဆီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ခေါင်းငြိမ့်ထားပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီးဖက်ကတော့ တရာသီ ဂိုး၃၀ အနည်းဆုံး သွင်းယူပေးနိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှူး တဦးဦးကို ခေါ်ယူဖို့ ၊ လက်ရှိ ဈေးကွက် အတွင်း ဆက်တိုက် ကြိုးစားနေခဲ့ရာ ၊ ဒေါ့မွန် အသင်းရဲ့ နော်ဝေး ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ်မှူး အာလင်း ဟာလန်းကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမယ့် ၊ ၎င်းတို့ဖက်က ဟာလန်းကို တနှစ် ဆက်ထိန်းချင်တာကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ကို လုံးဝ မစတင်ခဲ့ရပါဘူး ။
လူကာကူ ဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် အရန် ပစ်မှတ်သာ ဖြစ်ပြီး ၊ အင်တာဖက်က ၎င်းအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း ၁၃၀ကို ငွေသားသက်သက်သာ ရယူလိုတဲ့ အတွက် အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်လာဖို့က အတော်လေး နှေးကွေးနေပါတယ် ။
တဖက်မှာ အင်တာမီလန် ပရိသတ်တွေဟာ ကလပ်ရဲ့ အဖိုးတန် ကစားသမား တဦး ဖြစ်တဲ့ လူကာကူကို ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ် အပေါ် လုံးဝ မနှစ်မြို့ကြပါဘူး ။ ဒီအတွက်ကြောင်း အပြောင်းအရွှေ့ ပြီးစီးဖို့ ထင်ထားတာထက်တောင် ပိုကြာလာနိုင်ပါတယ် ။
အင်တာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း တဦး ဖြစ်တဲ့ အန်တိုနီယို ကာဆာနို ကတော့ စကားမတည်တဲ့ လူကာကူကို မေးခွန်းထုတ်တဲ့ အနေနဲ့ Twitch Channel တခုနဲ့ အင်တာဗျူးခဲ့ရာမှာ ” အကယ်၍ ချဲလ်ဆီးဖက်က ဒီလောက် ငွေပမာဏနဲ့ ကမ်းလှမ်းလာတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် လူကာကူကို လန်ဒန်ဆီ လိုက်ပို့ပေးမှာပါ ။ ”
” အခုပြောနေရင်းတောင် ၊ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်ဟာ စဉ်းစားချင်ပါတယ် ။ လူကာကူ ဟာ အင်္ဂလန်မှာ ချဲလ်ဆီး ၊ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းတွေမှာ ဆိုးရွားတဲ့ ကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး ၊ အဲဗာတန်နဲ့သာ ကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ”
” နောက်ပြီး ကျွန်တော် ထပ်မေးချင်တာက ဘာလို့ ကိုယ့်ကို မနှစ်ခြိုက်တဲ့ ကလပ် အသင်းဆီ ဘာကြောင့် ပြန်သွားချင်ရတာလဲ ? ငွေကြေးကြောင့်လား ? ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ လူကာကူသာ ချဲလ်ဆီးကို ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ သောမတ်စ် တူချယ်ရဲ့ နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်လာမှာ သေချာပေမယ့် ၊ တီမို ဗာနာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ က အနည်းနဲ့ အများ မှေးမှိန်သွားနိုင်ပါတယ် ။
ဗာနာ ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်း လိုချင်တဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အဆုံးသတ် သေချာမှုတွေကို မပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ပွဲတပွဲမှာ အရေးပါတဲ့ အပြေးအား ၊ လုပ်အားတွေနဲ့ အချိန်ပြည့် ပေးဆပ် ကစားတတ်ပါတယ် ။ ၎င်းရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ ပွဲတွေ နည်းပေမယ့် ၊ ၎င်းရဲ့ လုပ်အားကြောင့် နိုင်တဲ့ ပွဲတွေက တပုံတပင်ပါပဲ ။
ချဲလ်ဆီး ဂန္တဝင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂျီယန်ဖရန်ကို ဇိုလာ ကတော့ လူကာကူကို ဘယ်လောက်ထိ နှစ်သက် သဘောကျနေပေမယ့် ၊ ၎င်းကြောင့် ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် အလုပ်တွေ လုပ်ပေးရတဲ့ ဗာနာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ မှေးမှိန်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိကြောင်း အခုလိုပဲ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ် ။
Tuttomercatoweb နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ဇိုလာ က ” ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မနှစ်က သာမန်ထက် ပိုမိုထူးကဲတဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ သူတို့ဆီမှာ ဂိုးသွင်းသေချာတဲ့ တိုက်စစ်မှူး မရှိနေတဲ့ အချက်ကိုပဲ လူတွေက ထောက်ပြနေကြပါတယ် ။ ”
” အများအားဖြင့် အခွင့်အရေးတွေ လိုတာထက် ပိုမို ဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် ၊ တချို့ပွဲတွေမှာ သူတို့ဟာ အဆုံးသတ်ပိုင်း အားနည်းနေခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ လိုအပ်ချက်ကို လူကာကူ က ဝင်ရောက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ မှန်ပေမယ့် ၊ ကျွန်တော် ကတော့ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို လက်ရှိ အရှိ အတိုင်းပဲ သဘောကျပါတယ် ။ ”
” ဗာနာဟာ အသင်းဖော်တိုင်း အတွက် ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် အလုပ်တွေ ဒိုင်ခံ လုပ်ပေးပါတယ် ။ ဒီ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် သူတို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာပါ ။ ဗာနာ ဟာ တခြား အသင်းဖော်တွေကို နေရာမှန်ဆီ ရောက်အောင် ပံ့ပိုးပေးပါတယ် ။ လူကာကူကို ချဲလ်ဆီးမှာ ပြန်လည် မြင်တွေ့ရဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားသည့်တိုင် ၊ ကျွန်တော်ဟာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကို လက်ရှိ ပုံစံအတိုင်းပဲ သဘောကျပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။